Indlela yokwandisa i-Amazon yokuthengisa kunye nokuba ngumthengisi ongcono kakhulu?
Kwiintsuku zethu, i-Amazon ngumthengisi omkhulu wehlabathi kwi-intanethi apho unokufumana iimveliso kuzo zonke izinto ezithandayo. Eli qonga libonelela ngamathuba aphezulu kubathengisi kunye nabathengisi bezithathu. Ukuba unendlela ephucukileyo yokuphuhlisa ishishini lakho, i-Amazon iya kukudumisa ngemali ephezulu kunye ne-TOP position position.
Ukuthandwa kwe-Amazon yokubuyisela i-platform kuyaqhubeka ukunyuka imihla ngemihla, kubangele abathengi abaninzi abathembekileyo. Ngokutsho kwedatha yeenkcukacha, ubuncinane i-$ 88,000 isetyenziswe rhoqo ngomzuzu kwihlabathi - navy hats for sale of the day. Abathengi bayibeka i-Amazon njengeqonga apho banokufumana yonke into, ngaphezu kweGoogle. I-Google isengumthombo obalulekileyo, kodwa ngolwazi, kungekhona abaphandi bemveliso.
Konke okuthethwayo, ndicinga ukuba kuya kuba yinto efanelekileyo ukukwabelana nawe ngezinye iingcebiso malunga nokunyusa i-Amazon yokuthengisa nokuphucula isikhundla sakho. Ngoko, makhe sijonge ngokubhekisele kwezi ngcebiso kunye neengcebiso.
Izindlela zokwandisa ukuthengiswa kwe-Amazon
Ukuvelisa iimpendulo ezintle kwi-Amazon
Amandla okubukwa kwabaxhasi kwi-Amazon akakwazi ukunyulwa. Zineempembelelo eziphambili kwicandelo lakho lokubeka uluhlu kwikhasi lemihla yophando lwe-Amazon kwaye zinokuphucula okanye zonakalisa imizamo yakho yokwenza umsebenzi. Ngokutsho kwamanani amashishini asandul 'ukutshintsha, i-88% yabathengi bathi bayathemba ukuhlaziywa kwe-intanethi ngokubhekiselele kwiingcebiso zabo kunye nokwenza izigqibo zabo zokuthenga ngokusekelwe kwinani kunye nomgangatho wohlolo lwangoku kunye neenkwenkwezi zeenkwenkwezi.
Yingakho kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukuvelisa umgangatho kunye nokuhlolwa kwezinto eziphilayo kwimveliso yakho. Ukuphononongwa kunye nomxholo wevidiyo okanye imifanekiso kunokusebenza emangalisayo. Ngoko, khuthaza abathengi bakho ngokuqhelekileyo ukuba bayeke ukuhlaziywa kwexesha elide nokuchazayo ukuze bancede abanye abathengi bathathe isigqibo esifanelekileyo. Ukuba uyazi abantu bakuloo ndawo abaye banandipha imveliso yakho, yiya kubo uze ubuze malunga nokuphononongwa kokuhlaziya.
Nangona kunjalo, kufuneka uqaphele ukuba i-Amazon ixhathisa ngokukhawuleza ngokubhekiselele kokungekho kwendalo okanye, ngamanye amazwi, ukuhlolwa okunyanisekileyo. Yingakho kufuneka uqinisekise ukuba zonke iimveliso zakho zengxelo zenziwe ngokulinganayo kwaye zijonge ezendalo.
Ukulawula zonke iimveliso zakho zokuvavanya kwaye uhlale uqaphela ukuphazamiseka okungekhoyo, ungasebenzisa isofthiwe esicwangcisiweyo yophando kule njongo. Ngokomzekelo, i-Feedback Five-tool iya kunceda ukwandisa umthamo weengxelo ezingeniswe kwaye kwangoko uphendule ngeempendulo ezingalunganga.
Yenza umsebenzi wokubeka uluhlu lwakho lokuphucula nokuphuculwa
Inkqubo yokubala yase-Amazon ingqalelo nje kuphela ukuhlaziywa kwemveliso, ukulinganisa umthengisi, kunye nexabiso, kodwa nendlela nendlela uluhlu lwemveliso luhlelwe ngayo. NjengaseGoogle, udinga ngokucwangcisekileyo ukuquka amagama akho okukhangela kwisihloko, iibhola zebhola, kunye nenkcazo. I-Amazon inikezela abathengisi ngethuba lokufaka isihloko somkhiqizo kunye nemigqaliselo yokukhangela kunye namagama achazayo. Le ngongoma ye-Amazon ukulungiswa kwezinto ze-Amazon ihluke kwiGoogle apho kufuneka ufumane isihloko esifutshane nesichanekileyo kunye negama elilodwa elijoliswe kuyo.Nangona kunjalo, i-Amazon ifuna ukwenza lula inkqubo yokukhangela zombini i-bots kunye nabasebenzisi, ngokubanika inkcazo yemveliso ecacileyo kanye kanye. I-Amazon iphakamisa ukuba ifake iimpawu zomkhiqizo ezilandelayo kwisihloko: umkhwa, inkcazo, umgca wemveliso, impahla, umbala, ubukhulu kunye nobungakanani. Nangona kunjalo, akukho mfuneko yokuquka intengo kunye nezivakalisi zentengiso kwisihloko sakho ukwenza abathengi bagxininise ulwazi oluphambili.
Ukufumana amagama afunekileyo kunye nentsingiselo ekujoliswe kuyo, ndikucebisa ukuba usebenzise ithuluzi legama le-Amazon elingundoqo, elisebenzisa isevisi ye-Amazon ngokuzenzekelayo yokufumana amagama athile aqhelekileyo emsila.Ngaphezu koko, usebenzisa le sixhobo, unokuvavanya umthamo wokusesha kwixesha elikhethiweyo lokucinga.
Izindlela zokuphumelela ibhokisi lokuthenga kwi-Amazon
i-Amazon yipulatifomi yokukhangela ngokukhawuleza apho ibe yintengiso enkulu okanye iphumelele ibhokisi lokuthenga; kufuneka ufumane imbali efanelekileyo yokuthengisa kunye nomgaqo-nkqubo wokuncintisana. I-Amazon ayinikezeli uluhlu lwemigaqo eqinile kwindlela yokuphumelela ibhokisi lokuthenga, kodwa kukho izinto ezininzi eziyaziwayo ukuba zichaphazele ukukwazi ukuwunqoba.
Okokuqala, kufuneka uyenze ukunyusa ukulungiswa kwebhokisi lokuthenga. Ukwenza njalo, kufuneka ube ne-akhawunti yomthengisi kwaye uthengise izinto zakho ubuncinane kwiinyanga ezintathu. Enye indlela onokuyiphucula ngayo ngokusebenzisa i-Amazon iinkonzo zokuzaliseka.
Ngaphezu koko, ukunqoba i-Amazon Buyise ibhokisi, kufuneka ube nezinga eliphezulu lokusebenza. Izinga eliphezulu lokusebenza linokuchaphazeleka ngolu hlobo njengembali yokuthengiswa ngempumelelo, iinkonzo zamakhasimende aphezulu, iimitha zamanani ezithengisayo, kunye neenkonzo zokuhanjiswa kweenkonzo.
Ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwixabiso lakho elithengiweyo (intengo yemveliso yangempela kunye nentlawulo yokuhambisa). Ukuze uhlale ukhuphiswano kwi-niche yakho, kufuneka uhlalutye i-market niche analysis okanye usebenzise izixhobo ezikhethiweyo zokuhlawula izinto ezifana ne-FeedVisitor okanye iTeikametricks. Ezi zixhobo ziyakunceda uqaphele ngokuzenzekelayo ixabiso lemveliso ehambelana nicheke yakho yemarike. Ukusebenzisa esi sixhobo, uya kukwazi ukwenza zonke izilungiso ezifunekayo kumgaqo-nkqubo wexabiso lakho naxa ubona umntu ehlawula ixabiso eliphantsi.
Ukuhlawula ngokuCoca kwiNtengiso kwi-Amazon
Ukuba ungathanda ukwandisa inzuzo yakho kwi-Amazon, zama i-Amazon inkxaso yeprojekthi. Kuya kukunceda ukuba ubonise izinto zakho ngaphantsi kweziphumo zophando, kwikholomu yesandla sokunene okanye kumaphepha enkcukacha. I-Amazon PPC yindlela efanelekileyo yabathengisi be-intanethi ukuthenga isikhundla kwi-TOP ye-Amazon yokukhangela iziphumo. Ngokwale nkqubo, umrhwebi kufuneka ahlawule ngamnye umthengi ukuchofoza kwisibhengezo sakhe kwiziphumo zophando. I-niche ekhuphisanayo xa uthengisa kuyo, ixabiso eliphezulu lokuchofoza uzakulihlawula.
Iinkonzo zentengiso kwi-platform yase-Amazon
Iinkqubo zokunxibelelana kunye nabaxumi njengeefowuni ezichanekileyo kunye nokuthengiswa kwe-imeyili kuvunyelwe kwi-Amazon. Nangona kunjalo, akuthethi ukuba awukwazi ukusebenzisa naziphi na ezinye iindlela zokuphromotha ukutsala abathengi kwivenkile yakho ye-Amazon. Ungasebenzisa iblogi yokuposa kunye nokuthengiswa kweendaba zoluntu ukufezekisa oku. Ngaphezulu, unokwenza iblogi yakho ihambelane nebhishini lakho. Iziqonga ezifana neQuora, Hubpages, kunye ne-Go Articles nazo ziindawo ezintle zokubhala iziqulatho zomxholo malunga nesihloko sakho, apho ungashiya isiqhagamshelo kwi-akhawunti yakho ye-Amazon.